Elaine Diaz sy ireo Kiobàna Mpanao Gazety Miaraka Aminy, Nosamborina Fa Nanangona Vaovao “Tsy Nahazo Alàlana” Momba Ilay Tafiotra Mahery Matthew · Global Voices teny Malagasy
Elaine Diaz sy ireo Kiobàna Mpanao Gazety Miaraka Aminy, Nosamborina Fa Nanangona Vaovao “Tsy Nahazo Alàlana” Momba Ilay Tafiotra Mahery Matthew
Voadika ny 14 Oktobra 2016 2:21 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Français, English, English
Marianna Breytman, Elaine Diaz, Ivan Sigal, Ellery Roberts Biddle et Firuzeh Shokooh Valle, mpikambana ato amin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices, sary tamin'ny 2015.
Ny 12 Oktobra, nambaran'ny tranonkalam-baovao CubaNet fa nosamborin'ny manampahefana kiobàna niaraka tamin'ireo mpiaramiasa aminy, Mónica Baró, Julio Batista Rodríguez, Tomás E. Pérez et Geysi Guía, ny mpanao gazety Elaine Díaz, sady mpandray anjara ato amin'ny Global Voices ary mpanorina ny tranonkalam-baovao kiobàna Periodismo de Barrio. Tao an-tanànan'i Baracoa, any amin'ny faritany farany atsinanana indrindra ao Kiobà no nosamborina izy dimy ireo. [Fanavaozana voaray ny 13 oktobra 09:31- Fanamarihan'ny mpanoratra : ny mamanton'alin'ny 12 Oktobra, nanamafy i Elaine Diaz fa navotsotry ny polisy izy sy ireo mpiaramiasa aminy ary efa an-dàlana ho any La Havane.]
Tany Baracoa niaraka tamin'ireo mpiaramiasa aminy i Elaine mba hitatitra ny vokatr'ilay tafiotra mahery Matthew, niaraka taminà mpanao gazety efatra hafa izay nosamborina ihany koa. Fanentanana famatsiambola niainga avy eny ifotony no niantoka ilay dia nankany Baracoa.
Ny Periodismo de Barrio dia tetikasa vaovao momba ny media natombok'i Elaine tamin'ny 2015 mba hanatsaràna ny fandrakofam-baovao any amin'ny faritra momba ireo olana mifandray amin'ny resaka loza voajanahary, tontolo iainana ary ireo fotodrafitrasa any an-toerana.
Efa ho taona iray izao ry Elaine sy ireo efatra mpiaramiasa aminy, samy monina ao La Havane avokoa, no mandray anjara amin'ilay tetikasa. Ny ankamaroan'ireo mpikambana ao anatin'ilay vondrona dia sady niasa ho anà trano fanaovana gazety an'ny fanjakàna no miasa ihany koa ho an'ireo tranonkala aterineto tsy miankina ao Kiobà. Tamin'ny Septambra lasa teo, natolotra ho isan'ireo hahazo ilay loka fantadaza Prix Gabriel Garcia Marquez i Mónica Baró.
Nanao fijoroana ho vavolombelona tao anaty lahatsoratra iray an'ny Diario de las Americas ny nenitoan'i Elaine, Ceire Rodríguez, ary nanambara fa niezaka ny naka fahazoandàlana i Elaine mba hahafahan'ny ekipany mitsidika an'i Baracoa handrakotra ny vokatra naterak'ilay tafiotra mahery, saingy tsy nanome fahafahana miditra amin'ilay faritra afa-tsy ho an'ireo mpampahalàla vaovao “nahazo fanekena” ireo manampahefana.
Olona akaiky an'i Elaine no nitatitra hoe nilazàna ry zareo fa ho afindra any an-tanànan'i Guantanamo, izay tsy lavitra fa manakaiky ny ehoalan'i Guantanamo.
Isan'ireo notànan'ny fiarovam-pirenena tany Baracoa ihany koa ilay mpanao gazety avy amin'ny Diario de Cuba, Maykel González Vivero raha iny izy nandrakotra ny zava-nitranga nateraky ny tafiotra mahery Matthew iny. Ny 12 oktobra izy no navotsotra, rehefa nandalo andro telo tany am-pigadràna. Nambaran'i González tamin'ny Diario de Cuba fa tany am-piandohana dia “noho ny fiarovana ny filaminam-pirenena” no nitazonana azy, saingy novaina ireo fiampangàna taty aoriana kely ka nanjary hoe “fanaovana raharaham-barotra tsy ara-dalàna”
Nandritra ny taona maro, dia nanao asanà profesora nampianatra ny asa fanaovana gazety tao amin'ny Sekoly momba ny fifandraisana tao amin'ny Anjerimanontolon'i La Havane i Elaine Diaz, no sady nanoratra bilaogy tamin'ny fomba tsy miankina ho an'ny tranonkalany, La Polemica Digital (Ny Adihevitra Niomerika) ary sady manoratra ho an'ny Instituto de Prensa y Sociedad. Feo iray tò teny izy eo anivon'ny tontolon'ny bilaogy kiobàna, nanomboka tany afovoan'ny taona 2000 tany, nanorina ny lazany niainga tamin'ny fahalalàny ireo olana manjo ny vahoaka, toy ny fanabeazana, fotodrafitrasa ary ny tambajotra famatsiana (rano, entona, herinaratra…) ao Kiobà.
Nahazo ny vatsimpianarana Nieman natolotry ny Anjerimanontolon'i Harvard ho an'ny taona 2015-2016 i Elaine Diaz (izy no kiobàna mpanao gazety nahazo izany voalohany indrindra). Amin'io vanimpotoana io, mianatra miaraka amin'ireo mpanao gazety avy any Ejipta. Shily, Shina, Rosia, Espaina ary Etazonia izy, ary eo anilan'ilay mpanoratra malaza, Anne Bernays sy Ethan Zuckerman, profesora ao amin'ny MIT no sady mpiara-manorina ny Global Voices.
Fantatray ary iarahanay miasa hatramin'ny 2010 i Elaine, miasa saina ny vondrom-piarahamoninay noho ity vaovao ity ary manainga ny manampahefana kiobàna izahay mba hamotsotra avy hatrany an'i Elaine sy ireo mpiaramiasa aminy.